Desperados III: simbiso yekuti ichauya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Desperados III: simbiso yekuti ichauya kuLinux
Desperados III mutambo wevhidhiyo kubva kuMimimi Mitambo uye THQ Nordic iyo yakaiswa muWild West. Iko parizvino inowanikwa natively yeWindows, asi izvozvi zvakasimbiswa kuti iri kugadzirirwa Linux uye macOS futi. Nhau huru dzakasimbiswa kubva kune yepamutemo THQ Nordic account pa Twitter.
Mune iyo tweet iwe waigona kuverenga kuti zvemukati zvinyorwa zvaizosvika muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu uye «Zvakare, pachave nekugadziriswa zhizha rino, kuwedzera rutsigiro rweMac neLinux«. Nhau dzakanaka kune avo vanofarira iyi mhando yemavhidhiyo mutambo uye vanoshandisa iyo penguin chikuva. Muchokwadi, kana tikatarisa iro basa hombe ravakaita muShadow Tactics: Blades yeShogun, ichave inoshamisa mune yechiitiko chaDesperados III futi.
Nenzira, zvinoita sekudaro Feral Interactive zvave zvishoma nguva pfupi yadarika, kwete kuunza madoko kuLinux sezvaimboita ... nei zvakadaro? Zvakanaka, mukushayikwa kweizvi, nhau dzakanaka ndidzo.
Kana zvakadaro hunhu hwemutambo wevhidhiyo, kana usati uchizviziva, ndeizvi:
Unogona kutamba ne mavara mashanu akasarudzika, nehunyanzvi hwayo uye kugona kwayo. Chimwe chinhu senge maCommandos, muchokwadi, chinotaridzika zvakanyanya senge mutambo wevhidhiyo, varwi chete vane pfuti.
Unogona sarudza wakasununguka nzira dzakasiyana siyana dzekukunda zvipingaidzo.
Kurwa nemapoka akakura evavengi nenzira yakarongwa uye nekuchenjerera.
Un zvisingagumi zveWest West zviitiko, nemaguta emuganhu akafanana enguva ino, asinganzwisisike madutu, zviteshi zvezvitima, maguta akapararira, nezvimwe.
Unogona kusarudza pakati zvinouraya uye zvimwe zvisingauraye. Nekuba uye zvombo zvakasiyana siyana.
Iine akati wandei matambudziko nematambudziko.
Showdown modhi izvo zvinokutendera iwe kushandisa kumbomira chero nguva uye kupindura kune vanovandira kana kushamisika kurwisa.
Kana izvi inowanikwa yeLinux, iwe unotoziva kuti iwe unogona kuiwana mune yako yaunofarira mutambo chitoro, Valve Steam...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Desperados III: simbiso yekuti ichauya kuLinux
Ndakatamba mutambo uyu mushanduro yayo 1 ne2, mutambo wakanaka zvakadii wakamirira kuti ubude linux.
Pane imwe vhezheni inonzi "Helldorado" iri mushure ma2 o'clock.
Krita 4.3.0 yasvika nechikwangwani cheshanduro yakagadzikana kwazvo munhoroondo yayo